IT Fundamentals - BIM Trainings
The Fundamentals program is designed to provide the attendance with the knowledge to identify and explain basic computer components, set upabasic server, conduct basic installation, establish basic network connectivity, identify compatibility issues and identify/prevent basic security risks. This program will also provide the knowledge in the areas of safety and preventative maintenance of computers. This program intended for candidates who are users that are consideringacareer in IT and later considering the pursuit ofaother specialized IT certification.
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ မိမိနဲ့သင့်တော်လား၊ မသင့်တော်လား မိမိကိုယ်တိုင် စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်သက်စာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ လမ်းရဲ့ အကွေ့အကောက် အဖြောင့်အမတ် စတာတွေကို မလျှောက်လမ်းခင်က သိထားနှင့်လျှင် တကယ်လျှောက်လှမ်းဖို့ သင့်တောာ် မသင့်တော် ပိုမိုမှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုကို တခြားသူရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သော်လည်းကောင်း ရွေးချယ်ပြီးမှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားမှု ကျဆင်းပြီး အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်၊ ပျော်ရွှင်သင့်သလောက် မပျော်ရွှင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းခုလတ်ရောက်မှ နောက်ပြန်ဆုတ်တာတွေကြောင့် ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ စတာတွေအတွက်ပါ နှမြောဖို့ ကောင်းပါတယ်။
IT ပညာရပ်ဆိုတာကလည်း ပြောရင်သာလွယ်တာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်တဲ့အခါ ရွေးစရာတော်တော်များပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရရင်.
Network Engineer လုပ်ချင်တာလား? System Engineer လုပ်ချင်တာလား? Security Engineer လုပ်ချင်တာလား? App Dev လုပ်ချင်တာလား? စသည်ဖြင့် လမ်းခွဲတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် အသေးစိတ် ပြန်မခွဲရသေးပါဘူး။
ဘယ်လမ်းက ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်မလဲ၊ ဘယ်လမ်းက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလဲ၊ လမ်းတစ်ခုချင်းစီမှာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့် အကောင်း အဆိုး စတာတွေ သိမြင်ပြီး စဉ်းစားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
T Fundamentals ကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့်
၁. IT အခြေခံကောင်းများ ရရှိစေခြင်း
၂. မိမိဝါသနာပါရာ ဘာသာရပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးချယ်နိုင်မယ့် အသိရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
IT Fundamental Program ဟာ CompTIA A+ Certification ကို Cover ဖြစ်တဲ့အပြင် System/Server Administration နဲ့ Network Basic တွေကိုပါသင်ကြားပေးမဲ့အတွက် ရှေ့ဆက်မယ့် Advance Level အတွက် ခိုင်မာတဲ့ အခြေခံကောင်းများ ရရှိမယ့်အပြင် IT Support အဖြစ်ပါ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အထောက်ကူပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1.1 Personal computers and Servers
2.2 Electrical connector
3.0 Operating Systems
3.3 Open-source software
3.3 64-bit computing
4.1 Virtualization Basics
5.0 Installation and Configuration
5.1 Installation (computer programs)
5.2 Windows Update
5.3 Software license
5.4 Control Panel (Windows)
5.5 System Preferences
6.1 Productivity software
6.2 Collaboration software
6.3 Utility software
6.4 Filename extension
7.0 File Systems
7.1 Disk partitioning
7.2 Master boot record
7.3 GUID Partition Table
7.4 File system
7.5 File Allocation Table (FAT)/NTFS/HFS/ext64
8.0 File Management
8.2 File shortcut
8.3 Keyboard shortcut
8.4 File attribute
8.5 File system permissions
8.7 Computer accessibility
9.0 Commands and Scripting
9.1 Command-line interface
9.2 Pipeline (Unix)
9.3 Redirection (computing)
9.4 Path (computing)
9.6 Terminal (OS X) and Linux Console
9.7 Batch file/Shell Script
10.1 Computer network
10.2 Wireless network
10.4 Shared resource
11.2 Router (computing)
11.4 Internet service provider
11.5 File transfer
11.6 Peer-to-peer file sharing
12.0 Basic Server Administration
12.1 Introducing Windows Servers
12.2 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
12.3 Configuring Windows Server 2012 R2
12.4 Administration Windows Server 2012 R2
12.5 Introducing Active Directory Windows Server 2012 R2
12.6 Configuring Users and Groups in Windows Server 2012 R2
13.1 Internet security
13.2 Password manager
13.3 Hardening (computing)
13.4 Multi-factor authentication
13.5 File transfer
13.6 Peer-to-peer file sharing
13.0 Internet Safety and Physical Safety
13.1 Internet safety
13.2 HTTP cookie
13.3 Public key certificate
13.4 Personally identifiable information
13.5 Computer recycling
13.6 PC power management
13.7 Electrostatic discharge
13.8 Physical ergonomics
14.2 Computer maintenance
14.4 Backup rotation scheme
15.0 Mobile Devices
15.1 Mobile device
15.3 Voice over IP